Hawsha ECG ee Australia ugu dambeyn waa shaqeyneysaa | Waxaan ka socdaa mac
Socdaal Waxaan kuu sheegnay in mas'uuliyiinta caafimaadka ee Australia ay ansixiyeen bilaabida howlaha ECG ee dalka. Dhowr bilood ka dib waxay umuuqataa in Apple horeyba waa loo diyaariyay oo waa diyaar ficil ahaan. Ka dib markii la bilaabay watchOS 7.4, oo ay kujirto waxqabadka, isticmaaleyaasha shirkad Mareykan ah oo iswaafajinaysa smartwatch waxay awoodi doonaan inay ka faa'iideystaan ​​faa'iidooyinka qalabkan iyo arjiga.
Isticmaalayaasha Apple Watch ee Australia waxay hadda isticmaali karaan muuqaalka ECG, ka dib oggolaanshaha sharciyeynta ee maamulka caafimaadka gobolka bishii Maarso, durba waa shaqeysaa dhammaan kuwa haysta noocyada 'watchOS' 7.4 ee ku habboon saacaddooda
JeffWilliams, Sarkaalka hawlgalka Apple:
Apple Watch waxay caawisay dad aad u tiro badan oo adduunka ah, waana sharaf in ay noqotay qayb muhiim u ah nolosha macaamiisheena. Markii la bilaabay howlahan wadnaha ee Australia, Apple Watch qaado tallaabada xigta si loo xoojiyo dadka macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan caafimaadkooda.
Waxay heshay taageerada maamulka caafimaadka ee dalka. Tusaale ahaan Xarunta Caafimaadka Wadnaha iyo Cilmi-baarista ee Xarunta Wadnaha ee Australiya, maareeyeheeda, biilka stavreski, ayaa sheegay:
Xogta ay soo aruurisay Apple Watch waxaa loo isticmaali karaa in lagu caawiyo baaritaanka cilladda atrial fibrillation goor hore. In kasta oo fibrillation badanaa u horseedo nolol liidata, dad badan ayaan lahayn astaamo ama way iska indhatiri karaan astaamaha mararka qaarkood. Tan macnaheedu waa in dhibaatada aan la heli karin ilaa cawaaqib xumo sida istaroog dhacdo, sidaas darteed ogaanshaha hore waxay kuu horseedi kartaa natiijo wanaagsan.
Horey waad u ogayd in Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, ama Taxanaha 6. Moodooyinka kale way soo baxeen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » Hawsha ECG ee Australia ugu dambeyn way shaqaysaa
Weerarkii ugu dambeeyay ee Intel ay ku qaadday Apple gebi ahaanba waa ismaqal